Somaliland Oo Uu Yimid, Madaxweynaha Dal La Aasaasay 2 Sano ka Hor
Somaliland Oo Uu Booqasho Ku Yimid, Madaxweynaha Dal La Aasaasay Laba Sano ka Hor
Hargeysa (Dhamays) – Madaxweynaha Jamhuuriyada Xorta ah ee Liberland Md Vit jedilck oo uu wehelinayo Wasiirkiisa Madaxtooyada ayaa booqasho hawleed oo saddex maalmood ah ku yimid dalka Somaliland.
Weftigan ka socda dalka Liberland ayaa shalay subax ka soo degay gegida dayuuradaha ee Egal International Airport ee Caasimadda Hargeysa, waxaana dalka ku soo dhaweeyey Masuuliyiinta Wasaaradda Arrimaha Debada iyo Iskaashiga Caalamiga ah iyo Wasaaradda Ganacsiga iyo Maalgashiga Caalamiga ah, sidaasi awgeedna waxa isla markiiba la dejiyey Weftigan Maansoor Hotel oo ay Xalay u hoydeen.
Ujeeddada booqashada weftigan ka socda Jamhuuriyadda Xorta ah ee Liberland ayaa sheegaya inay tahay sidii ay u abuuri lahaayeen iskaashi iyo wax wada qabsi dhex mara labada dal ee Somaliland iyo Liberland. Warku waxa kale oo uu tilmaamay inay u qorshaysan tahay in Dalka Lebarland deeq caawimo ah oo dhan hal milyan oo dollar ay u fidiyaan dalka Somaliland.
Warku waxa uu intaasi uu ku darayaa in Weftigan ka socda dalka Liberland muddada ay ku sugan yihiin dalka Somaliland inay booqan doonaan goobo muhiim ah oo ku habboon maalgashiga oo ku kala yaalla gobollada dalka qaarkood, waxaana la sheegay in weftigan ka socda Dalka Jamhuuriyadda Xorta ah Liberland ay si weyn u dannaynayaan sidii ay u maalgashan lahaayeen kheyraadka dalka Somaliland.
Dalka Jamhuuriyadda Xorta ah ee Liberland waa Dalka saddexaad ee ugu yar Adduunka, waxaana cabbirka dhulkiisu uu guud ahaan dhan yahay 7km/sq.
Liberland, waa dal madaxbannaan oo ku yaalla meel yar u dhexaysa waddamada Croatia iyo Serbia, gaar ahaana dhinaca Galbeedka wabiga Danube.
Dalka Liberland waxa uu ka dhashay khilaaf xudduudeed dhex maray waddamada Croatia iyo Serbia, iyadoo aanay hore ciddi u lahayn amase u sheegan jirin lahaanshaha dhulka yar ee raacsan Wabigaasi, waxaana dhulkaasi uu ahaa dhul aanay ciddi lahayn, balse markii uu dhulkaasi uu qabsaday Guddoomiyihii Xisbiga Muwaadiniinta Xorta ah oo ay taariikhdu aheyd 13kii bishii April ee 2015, ayuu ka aasaasay dawlad cusub oo la yidhaahdo Liberland.
Dalka Jamhuuriyadda Xorta ah ee Lebarland waxay leedahay astaan iyo Nidaam siyaasadeed oo ku dhisan Dimuqraadiyada tooska ah oo macnaheedu tahay inay dhammaan dadka qaangaadhka ah ee ku dhaqan Lebarland ay xubin ka yihiin Golaha sharci dejinta ee Dalkaasi.
Ugu dambeyntii, Dalka Jamhuuriyadda Xorta ah ee Liberland oo la aasaasay 2015-tii, ayaan weli Dalalka Adduunka midna Aqoonsi ka haysan.
Previous: “Ma Qaabilayno Suldaanka Oromada” Saladiinta Somaliland
Next: Hargeysa: Qiimaha Biyaha Oo Sicir Gaar Ah Loo Jaray